Maxaa ku dhacay Hir Shabeele? | allsanaag
Maxaa ku dhacay Hir Shabeele?
Daahir Jeesoow iyo Goodax oo ku guuldaraystay in Caruurtooda wax baraan intay waqti ku luminayeen Mooryanimo iyo Daarood baa halka maray
Wasaaradda Waxbarashada Dowladda Soomaaliya ee Goodax wasiirka ka yahay ayaa maanta soo bandhigtay natiijooyinka imtixaanaadka dugsiyada sare ee dalka oo ay ka maqan yahiin iskuulada maamulka Puntland.
Sida natijadani sheegtay, Sideed Kun Arday oo ka mid ah ardada wax ka barata gobolka Banaadir waa dhaceen, halka Jubbaland iskuuladeeda ay ka dhaceen kaliya 4-qofood.
25 Kun Arday oo ku nool Muqdisho ayaa galay Imtixaanaadka, waxaana baasay 17 kun oo Arday.
Dugsiyada Gobolka Banaadir oo ah halka ay ku shaqayso ama ka shaqayso dawladda federaalka waa laga waayay 10-ka darajo ee ugu sarreysa iskuulada Dalka, waxaana shanta ugu sarreysa ay ku yaallaan Gobolka GEDO, gobolka Baay ayaa saddex iskuuul ku yeeshay halka Jubbada Hoose iyo Galgaduud ay min hal ku yeesheen.
← Wasiirka Bartoolka iyo Macdanta Deni iyo safarkiisii Muqdisho →